လူထောင်ချီရှိနေတဲ့ ဘောလုံးကွင်းအလယ်မှာ ကစားနေရင်း လဲကျပြီး ချက်ချင်း သေဆုံးသွားကြတဲ့ ကမ္ဘာ့ကျော်ဘောလုံးသမားကြီးများ...! - Thadin
Homeအားကစားကဏ္ဍလူထောင်ချီရှိနေတဲ့ ဘောလုံးကွင်းအလယ်မှာ ကစားနေရင်း လဲကျပြီး ချက်ချင်း သေဆုံးသွားကြတဲ့ ကမ္ဘာ့ကျော်ဘောလုံးသမားကြီးများ…!
March 2, 2019 Kay Kay အားကစားကဏ္ဍ Comments Off on လူထောင်ချီရှိနေတဲ့ ဘောလုံးကွင်းအလယ်မှာ ကစားနေရင်း လဲကျပြီး ချက်ချင်း သေဆုံးသွားကြတဲ့ ကမ္ဘာ့ကျော်ဘောလုံးသမားကြီးများ…!
သေခြင်းတရားဆိုတာ လူတွေမြန်ပါတယ်ပြောကြတဲ့ အမြန်ဆုံးကားတွေ တရွေ့ရွေ့ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ အချိန်ထက်တောင် မြန်ဆန်တာ ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တကယ်ဖြစ်ပျတ်သွားမှ အမှန်တယ်ဆိုတာ သိကြပါတယ်။ အားကစားသမားတွေလဲ အားကစားလုပ်လို့ အသက်ရှည်ကျန်းမာတယ်ဆိုတာ သိပ်တော့မမှန်ပါဘူး။
တစ်ချို့ဘောလုံသမားတွေဆို ဘောလုံကစားနေရင်းနဲ့တောင် သေဆုံးသွားတတ်တာတွေရရှိတတ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကျော်ဘောလုံသမားကြီးတွေလဲ လူထောင်ချီရှိနေတဲ့ ဘောလုံးကွင်းအလယ်မှာသူတို့အမြတ်တနိုး ချစ်ခင်ရတဲ့ ဘောလုံးကို ကိုယ်တိုင် ကစားနေရင်း လဲကျပြီး ချက်ချင်း သေဆုံးသွားကြပါတယ်။
ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ဘောလုံးကစားနေရင်း လဲကျပြီး သေဆုံးသွားကြတဲ့ ကမ္ဘာ့ကျော်ဘောလုံသမားကြီးတွေရဲက ဗီဒီယိုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အခုလိုဖော်ပြပေးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကိုယ်အနားမှာ ရှိတဲ့လူတွေလဲ ကိုယ်ကို ဘယ်အချိန်မှ ခွဲခွာသွားမယ်ဆိုတာ မသိတာကြောင့် လူတိုင်းကို စေတနာနဲ့ ဖော်ဖော်ရွေရွေဆက်ဆံတတ်စေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
This Year : 232832
Total Users : 591856
Views Today : 10817
Total views : 2716709